MADAXWEYNE FARMAAJO OO MAANTA QAATAY TALAALKA CUSUB – XAMAR POST
MADAXWEYNE FARMAAJO OO MAANTA QAATAY TALAALKA CUSUB
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta qaatay tallaalka cudurka COVID-19, sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay madaxtooyada, waxuuna madaxweynuhu adkeeyey mas’uuliyadda adag ee shacab iyo dowladba ka saaran samata-bixinta caafimaad ee bulshada
Qoraalka ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in Madaxweynuhu xoojiyey walwalka ku aaddan inay yartahay feejignaanta shacabka Soomaaliyeed ee cudurkan iyo halistiisa sii kordheysa.
“Masuuliyad adag ayaa inaga saaran daryeelka muwaadiniinteenna si aan uga hortagno in uu soo rito cudurkan safmarka ah ee dunida aafeeyey. Muhiimadda ugu weyn waa in aan dadaal kasta gelinnaa ka hortagga cudurkan innaga oo xoojineyna tayada iyo adeegyadeenna caafimaad,”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey Wasaaradda Caafimaad, dhakhaatiirta, kalkaaliyeyaasha, Adeegayaasha iyo guud ahaan Bahda Caafimaadka dalkeenna ‘dadaalka mugga weyn ee ay ku bixinayaan badqabka caafimaad ee shacabka Soomaaliyeed’ iyagoo ku shaqeynaya duruufo adag.
Qoraalka Villa Somalia ayaa lagu yiri, “Madaxweynaha oo ku ammaanay Xukuumadda uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble dadaalka ay ku bixisay in tallaalka Cudurka COVID-19 uu soo gaaro dalkenna ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay wada-shaqayn xooggan ee ka dhaxeysa Guddiga heer Federaal ee Xakameynta Cudurka COVID-19 iyo Guddiyada heer Dowlad Goboleed, taas oo aasaas u ah daadejinta adeegyada cafimaad ee lagu wajahayo cudurkan safmarka ah.”
MAXAY KAWADA HADLEYN M/HORRE SHIEKH SHARIF, M/DANI IYO M/AXMED MADOOBE?